Looga Hadlo Xaaladaha Qodobka Dheeraadka ah
Dhisidda xiriiro aad u farabadan oo loogu talagalay posts waxaad ka xishoon kartaa ololehaaga internetka, ma aha in la sheego saameynta saamiyadaada. Guud ahaan, wax soo saarka guud waxaa loola jeedaa soo saarida xiriiro badan oo la socdo tiro la bartilmaameedsanayo oo ah qoraallada ku xiran meelaha xiriiriyeyaashu ka qaataan qiimaha macnaha leh ee maadada oo aan wax qiimo ah bixin karin
Guud ahaan qoraalka qoraalka ah ee mawduucani waa mawduuc uu ku garaacayo cinwaanada muddo dhawr sano ah. La-taliyayaasha suuq-geynta, milkiilayaasha bogga elektarooniga ah, iyo suuq-gareenta macaamiisha waxay u muuqdaan inay abuurayaan isku-xiryo aad u farabadan oo loogu talagalay bogagga internetka, oo ah dhacdo taas oo horseedi karta liisaska hoose ee algorithms - asp web hosting. Si kor loogu qaado hawlgalkaaga isticmaalkaaga iyo inaad ku darajo sare ee algorithms, tixgeli inaad isku xirto boggaga alaabtaada iyo boggaga qaybtaada si haboon.
Waa kuwan warbixinta falanqaynta ee shabakadaha e-commerce oo si fiican u shaqaynaya. Warbixintu waxay ka dhigan tahay qoraalada qoraalka ah ee 31 bog oo badeeco iyo 28 bog oo kala duwan. Marka ay timaado suuq-geynta suuq-geynta , fahamka sifooyinka aasaasiga ah ee qoraalka ah ee muhiimka ah. Frank Abagnale, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Maamulaha Guud ee Macaamiisha, wuxuu ku siinayaa inaad eegto sifooyinka soo socda kuwaas oo kaa caawin doona in lagu falanqeeyo haddii isku xirnaanta ay ku jirto qoraalka lagu dhejiyey si sax ah loo dhajiyay
Ereyada muhiimka ah - Hubso in erayga muhiimka ahi uu ka kooban yahay qoraalka dhexda gaaban
Magaca Nooca - Inta badan, magaca calaamada ayaa lagu muujiyay qoraalka qoraalka ah
URL - Hubi in xiriirku leeyahay erayga saxda ah, ama waa URL
Branded - Hubso in calaamadda lagu soo qorey qoraalka qalinka
Vs. Non-Targeted Qoraalka Daar Leexinta
Warbixin ay soo saartay 28 qaybood oo bogag iyo 31 bog oo waxsoosaarka ah, 34.6% ee xiriiriyeyaasha la diiwaangeliyey ayaa la beegsaday..Erayada fudud, xirmooyinka saxan ee saxda ah ayaa lagu duubay 18.05%, URL oo ah 17.88%, calaamadda 30.84%, ereyada 16.58%. Qoraallada aan ku-talinta ahayn ee aan lagu beegsaneyn ayaa lagu diiwaangeliyey 16.64%
Bogga wax soo saarka
Xaaladdan oo kale, qaybinta qoraalka ku-meel-gaadhka ah iyo qoraalka aan la beegsaneyn waa mid aan kala-duwaneyn. Bogagga badeecadaha waxay ka reebaan boggaga category ee ku saabsan jumladaha xiriirka iyo xiriirinta xiriirka saxda ah. Qeybinta sawirada erayada isir-u-dhigista, iyo xiriirka saxda ah ee saxda ah ayaa diiwaangeliyay kororka boqolkiiba 4% iyo 7% siday u kala horreeyaan.
Marka ay timaaddo bogagga qaybta, isku-xidhka erayo wanaagsan iyo ereyada muhiimka ah ayaa noqon doona mid aad u yar. Tirakoobku wuxuu muujinayaa in 25% ee xiriirrada la abuuray ee bogagga qaybta lagu bartilmaameedsanayo. Tusaale ahaan, 'kale,' waxay matalaan qaybinta qoraalka aan lagu beegsanayn. Marka la barbardhigo qodobbada aan tooska ahayn ee lagu beegsanayay qoraalka, xiriirinta URL iyo calaamadaha la diiwaangeliyey boqolkiiba 7% iyo 5% siday u kala horreeyaan. Inta badan tirooyinka la duubay waxay ka tarjumayaan calaamadaha muhiimka ah iyo odhaahaha. Waxaa muhiim ah in la ogaado in qeybta calaamada nooca ah ay diiwaan gashay qaybinta 12.23%.
Saameyntii ugu fiicnayd ololeyaal online ah
Abuurista xiriiro aad u badan oo ku jira mawduucaaga ayaa si xun u saameynaya darajooyinkaaga. Badeeco ahaan, ka feker sii kordhinta qoraalka iyo hoos u dhigida tirada isku-xirnaanta ah ee lagula beegsado si aad u weerarto suuqa bartilmaameedkaaga waqtiga dhabta ah
Muhiimadda lagu dheellitirayo qiyaastaada caadiga ah lama burin karo. Haddii aad ka shaqaynaysay ololehaaga SEO iyo luuqada muhiimka ah ee isbedelka ah ayaa weli hooseysa, waxaad tixgelisaa samaynta qoraalo kala duwan si loo hagaajiyo muuqaalkaaga ololaha. Xaaladdan oo kale, ereyga 'caadiga' wuxuu macnihiisu yahay macnaha kala duwan ee warshadaha kala duwan. Samee baadhitaan si aad u tilmaanto qoraalka ugu wanaagsan ee ololahaaga loogu talagalay ololehaaga